Simbisa 5 inogadziridzwa nenhau dzakakosha | IPhone nhau
Simbisa 5 inogadziridzwa nenhau dzakakosha
Ignacio Sala | | IPhone maapplication, Apple tv
Parizvino sarudzo yega yatinogona kuwana muApp Store kana tichida vhidhiyo inoridza inoburitsa chero fomati, zvisinei nemacodecs anoshandiswa, ndeyeKupa 5, chishandiso icho mwedzi mishoma yapfuura chakagadziridzwa zvachose, zvichimanikidza vashandisi veiyo yapfuura vhezheni , Simbisa 4, unofanirwa kubuda. Kunyangwe chiri chokwadi kuti chishandiso ichi hachina kudhura, chinodhura 12,99 euros kana 7,99 euros kana tichida kusarudza kunyoreswa kwegore, zvinokodzera yuro yega inodhura, nekuti sekutaura kwandataura hapana imwe sarudzo muApp Store. izvo zvinowirirana kwete chete nemafomati ese ari pamusika, asiwo nekuti zvinotipawo sarudzo yekugona tamba mavhidhiyo akachengetwa padandemutande hard drive kuburikidza nePlex, Kodi, NAS….
Inomisikidza 5 inotibvumidza kutamba zvirimo zvakachengetwa mukati memwaka wekuchengetedza gore uyo watinoshandisa, trakt.tv kuwiriranisa, inowirirana neAirPlay neGoogle Cast, pamwe nekuenderana nechizvarwa chechina Apple TV. Infuse 4 ichangobva kugamuchira mutsva mutsva umo mabasa matsva akawedzerwa, mabasa ayo mune zvimwe zviitiko angave akareruka, asi kana tikashandisa zvakanyanya, anogamuchirwa kwazvo. Pakati pe main novelties anopihwa neshanduro 5.2 yeInzira 5 tinowana:
Tsvaga ese maraibhurari uye maforodha.
Tsigiro yemavhidhiyo ari muDVD fomati, ingave ISO / IMG kana VIDEO_TS kana dvdmedia.
Kutenderera kubva kuNFS dhiraivha izvozvi zvave kugona
Mazita anoratidzwa zvichienderana nezuva rekuburitsa.
Kana zvasvika pakutangisa / kutangazve / kutsvaga zvemukati, iyo buffer yakagadziridzwa, zvekuti izvozvi mutoro wakurumidza.
Kuvimbika kwehukama hweWebDADAV kwakagadziridzwawo
Kuvandudzwa kwekuchengetedzeka uye kugadzikana kwekushandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Simbisa 5 inogadziridzwa nenhau dzakakosha
Zvinotaridza kuti hauna kutsvaga zvakanyanya muAppstore, zvingave zvakanaka dai paingova neapp iyi yekutarisa mavhidhiyo pane zvishandiso zveIOS pasina kuashandura ... ndine imwe yandinoshandisa kubvira pandakatenga iPad yangu 2 a makore mazhinji apfuura, yakagara ichishanda zvakanakisa uye ichipa zvimwe zvingasarudzika pane Kusimbisa ... uye zvakanakisa pane zvese, ini ndakangozvibhadharira kamwe chete uye zvese zvave kugadziridzwa zvave zvemahara. Handitaure zita rekuti ndidzivise kushambadza, asi ndapota, usati wataura kuti ichi ndicho chega cheapp, zivisa iwe zvirinani.
Ivo vari kupa kuzivisa, taura zita racho kuti iwe uzivise zvirinani uye utaure ne base
Ndeupi mukurumbira iwe wauri kuzopa? Iyi iblogiti yekuziviswa nezve nyika yeIOS uye pamwe chete zvinotibatsira kuti tive nezvakanakisa kunyorera.
Pindura kuna Selui
Ndisati ndanyora ndinozvizivisa. Iko kushandiswa kukuru kwandinoita kweiyo iPad ndeyekutarisa akateedzana uye mabhaisikopo kwese kwandinenge ndiri. Kwemakore mazhinji ini ndatsvaga uye ndatsvaga zvikumbiro zvinondipa zvese izvo Infuse zvinondipa uye ini handina kuzviwana. Havasi vese vatambi vanowirirana, semuenzaniso, neAAC3 odhiyo fomati, uye havaverenge maDVD mafaera, uye haatipe mabasa ese atinogona kuwana neKupa. Zvichida kana iwe ukaisa akati wandei kunyorera pamwechete ivo vanozoita zvakafanana seKupfekedza, asi kuti kune mumwe mukuru kune icho ini ndinopokana nazvo.
16 Yemahara Mitambo uye Kunyorera kweanokurumidza (Ndira 25)
8x19 Podcast: iOS 10.3 Nhau